Isixhobo esiqhubela phambili se-Hardware, i-Metal Stamping Die, i-Sunroof Tool-Lango Mold
I-Kunshan JS Mold ngomnye womgangatho ophezulu wokwenza isitofu sokungunda seplastiki esebenza ngokukodwa ekwenzeni imixokelelwane kunye nokubumba kunye nokudibanisa iiyunithi ezigqityiweyo. Sisebenza ngokukhethekileyo kumyili ochanekileyo kunye nomenzi weminyaka eyi-15, kunye neqela loyilo elinamava kunye neqela lobunjineli lobuchwephesha, elinomgangatho olungileyo kunye nexabiso elihle lokukhuphisana.
Njengenkampani eqinisekisiweyo ye-ISO9001: i-2015, i-Kunshan JS Mold inoluhlu loyilo oluhlanganisiweyo lokungunda, ukuvelisa, kunye nomgangatho wokuvavanya, olungele iJapan, i-USA, iYurophu kunye nezinye iimfuno zamazwe, ngumsebenzi wethu ukuhambisa iimbumba ezingcono kunye nezibunjiweyo. iinxalenye kwimarike ngokusebenzisa iinkqubo zolawulo olungqongqo.
Isisombululo esisodwa seplastiki esipheleleyo: Uyilo kunye nophuhliso, ukwakhiwa kwezixhobo, ubunjineli, ukubunjwa kwesitofu, iNdibano kunye nokuPakisha. Iqela lethu elichwepheshile neliphendulayo labasombululi beengxaki ezingapheliyo liya kujongana neemfuno zakho ixesha elizeleyo, oku kuya kuba yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yethu yenkonzo.
ILangO yiNkampani yezixhobo esebenza kuzo zonke iintlobo zezixhobo zentsimbi kunye neendawo zokutywina zentsimbi, iimveliso zethu ezibandakanyeka ikakhulu kukwenziwa kwezixhobo zentsimbi kunye nokuvelisa iindawo zokutywina ngentsimbi.
Izixhobo zePlastiki zeSithuthuthu zenziwe eTshayina